Tijaabinta Shaqaalaha TCDD ee laga soo qabtay Feto Turkish | RayHaber | raillynews
HomeGUUDFetöden oo la xiray TCDD Dacwadihii Shaqaalihii la bilaabay
20 / 12 / 2016 GUUD, HAY'ADAHA, TURKEY, TCDD
Bilaabin Trial shaqaalaha ayaa la xiray TCDD ka Feton: Feton in Eskisehir / PCM ayaa la xiray baaritaan ku qariyeen Republic of Turkey Tareennada State madaxda (TCDD) 3 bilaabay maxkamadda oo ka mid ah lagu eedeeyay.
Injineerka 15 2 3, oo lagu xiray baaxadda baaritaanka uu bilaabay ka dib isku daygii afgambi ee Luulyo, wuxuu ku socdaa maxkamad eedeysanaha. Maxakamada Ciqaabta culus ayaa bilaabatay. Eedeysaneyaasha, eheladooda iyo qareenadooda ayaa ka qeybgalay dhageysiga. AK, Injineerka oo ka marag furay dhageysiga, ayaa sheegay inuu horay ugu marqaati furay booliska iyo xafiiska xeer ilaaliyaha wuxuuna yiri, waxaan ku celinayaa hadaladii hore. Ma aqbalayo eedeymaha laygu soo oogay. Gobolku waa i barbareeyay. Waxaan ku koray agoonta. Waxaan xubin ka noqday xarumaha ay dowladu aqbashay. Caddaynta maaddada ee dambiyada lama hordhigin. In kasta oo aanan ka qaybgalin afgambigii haddana ma fahmin eedeynta. Waxaan ka imid Mardin Qoyskeygu waa difaac. Waxaan siinay shahiid badan. Waxaan wajahaynaa khatarta PKK. Aniga iyo aabbahay iyo laba adeeradood oo shahiiday, dad badan oo reerkayga ka mid ah ayaa lafaha daadanaya. Waxaa la ii tusay urur argagixiso maxaa yeelay waxaan xubin ka ahaa midowga. Xubinnimada ururada shaqaalaha iyo ururada ayaa dhiiri geliyay gobolka. Suurtagal maaha in lagu garto inay tahay dambi. Caddayn in ururka ama ururku uu galay dambi. Jiritaanka ururka midowga waxaa bixiyay gobolka. Sidaa darteed, gobolka ma weydiin karo dambiga. Lacag bangiyo ma aha dambi. Gobolka ayaa taageeray bangigan. Bangigu wuxuu sii waday taariikhaha markaan sameeyay deebaajiga. Haddii gobolku arki lahaa dambi, wuu joojin kari lahaa howlihiisa wakhtigaas. Way iska cadahay in Bangigu aanu qaban wax hawleed ah ilaa uu u wareejiyay SDIF. Kaliya xisaab bangi kuma lihi, laakiin sidoo kale waxaan heystaa xisaabta dahabka iyo saamiga. Waxaa la i qabtay maalmo 2 ah. Waxaan rabaa in la siidaayo. ”
TCDD'nin 'Abi'si ayaa sida la sheegay HY ku sheegay qoraalkiisa soo socda;
Kuma fiicana farsamada. Waxaan maqlay magaca barnaamijka 'Bylock' markii ugu horreysay weydiimaha. Aniga iyo qoyskeygaba ma aanan isticmaalin barnaamijkaan. Markii laga hadlayo ururka shaqaalaha, waxaan xubin ka noqday ururro shaqaale oo kaladuwan xilligii aan shaqeynayay. Waxaan ka tagay midowga bishii Maajo ee 2016. Ma helin wax digniin ah oo ku saabsan midowga. Suuragal maahan in aan ogaado in gobolku uusan sidaas ahayn. Maanaan yeelan kulan. Waxaan hore u ahaan jirnay dadka 3. Waxaan ahaa xubnihii ugu dambeeyay. Waxay rabeen inaan ka maareeyo culeyska shaqadooda. Laba jeer ayaan la kulannay. Ururku wuxuu yidhi waa urur sharci ahaan loo aasaasay. Waxaan raaceynay qodobbada ku xusan jaartarka ururkeenna. Ururka waxaa loo xiray dhibaatooyin dhaqaale awgeed. Waxaan ku leeyahay koonto Bank Asya tan iyo 1996. Xawaaladda lacagta ee bangiga ayaa ah waxqabadka bangiga. Cafis ma aha. Waxay ahayd banki aan dulsaar lahayn. Markaa waan ka doorbiday. Waxaan haystaa dhaqdhaqaaqyo xisaab oo dheeri ah kahor 2012. Ma aanan maqlin tilmaamaha FETÖ ee ah in lacagta la dhigo 2013 Diseembar. Waxaan ahay walaalka TCDD iyo machadyada kale. Aniguba kumaan tabarbixin haba yaraatee aniga oo ku hadlaya magaca hemet ama deeq waxbarasho. Waxaan guriga ku joogay 15 bishii Luulyo. Waxaan la xiriiraa urur argagaxiso inkastoo hub uusan jirin. Waxaa lay xirey qiyaastii 4 bilood. Xariggu maahan ciqaab la i siiyay aniga iyo qoyskeyga. Dhibaatadayda dhaqaale ayaa sii kordheysa. Waxaan rabaa in la siidaayo. ”
Macalin xirfadeedka MA wuxuu kaloo cadeeyay inaysan aqbalin eedeymaha wuxuuna yiri: sendika Waa xubin ka noqoshada ururka oo loo cadeeyo inuu yahay cadeyn. Isbahaysigu waa xaq. Waxaan hore xubin uga ahaa ururrada shaqaalaha kale. Waxaan xubin ka noqday urur shaqaale oo leh qodobbada imaatinka goobta shaqada. Waxaa igu dhiirigaliyay in aan ku biiro midowga markii aan bixinayay khidmadaha. Waxaan iska casilay xubinimadii ururka dhammaadkii Juun markay ahayd 2016. Ma ogeyn inuu wax xiriir ah la leeyahay FETÖ. Waxaan Xisaab ka furay Bangiga Asya ee 2014. Hadafkeygu halkan waa inaan noqdo dulsaar la'aan. 6, oo ah mid ka mid xisaabtankayga, waa kun liras. Waxaan moodayay in haddii bangiyadaan iyo ururadani ay qayb ka yihiin dambiyada, in gobolka ay xiri doonaan. Kama aanan joogin guryahooda. Kama qayb gelin wadahadalkii. Kumaan qaadan qoriga dhabta ah, qoriga lagu ciyaaro. Dambiile ma ihi, waxaan rabaa siideynteyda ..
Maxkamaddu waxay xukuntay inay sii waddo xiritaanka eedaysanayaasha waxayna dib u dhigtay dhageysiga taariikh dambe oo la sugayo dokumentiyada maqan iyo dhageysiga marqaatiga.
Maxkamadeynta dadyowga udubdhexaadka ah ayaa sii waday Eskisehir